5 Bus na Kocaseyit Airport | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara10 Balikesir5 Bus maka Kocaseyit Airport
05 / 11 / 2019 10 Balikesir, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Mpaghara Marmara, Turkey
Ọdụ ụgbọ elu Kocaseyit
Ndị njem ụgbọ elu Edremit Kocaseyit iji ruo na ọdụ ụgbọ elu, Balikesir Metropolitan Mayor Yucel Yilmaz nyere iwu ịkwụsị. BTT A.Ş. Emere ahia ohuru nke 5 n'ime; N'etiti Balıkesir, Altınova na Altınoluk'tan na-amalite na Wednesde na-esote.
Balıkesir Public Transportation Joint Stock Joint (BTT) gbakwunyere 5 ụgbọ ala ọhụrụ na ụgbọ mmiri ya. Na-esochi ọgụgụ ekpere na mpe mpe akwa ahụ na emume a na Balıkesir Intercity Bus Terminal, Balıkesir Metropolitan Mayor Yücel Yılmaz, Onye isi oche nke Drigbọala Rıza Tekin, BTT A.Ş. Onye isi njikwa Atınç Akıncı, Mufti Ramazan Topcan na ndị isi nke ụlọ ọrụ ahụ hụrụ bọs ahụ. Dilek Arslan, naanị nwanyị ọkwọ ụgbọ ala nke ıgbọ njem ọha na Balıkesir, nọkwa n’azụ wiil ahụ ma soro ndị isi ahụ. Iji na-ebufe ndị njem na-eme njem oge niile site na Bal tokesir gaa Edremit Kocaseyit n'ọdụ ụgbọ elu ma gbochie ụmụ amaala na-ata ahụhụ, BTT zụtara ụgbọ ala ọhụrụ site na ntuzi aka nke Onye Isi Obodo Brọdụ nke Yücel Yılmaz.
Na nkasi obi na nchekwa nke BTT A.Ş, a na-ebugharị ụgbọ ndị ahụ si Balıkesir gaa Edremit Kocaseyit Airport n'otu ụzọ ahụ; Ọ ga-ebido ọrụ site na Altinova ruo ọdụ ụgbọ elu Edremit Kocaseyit na site na Altinoluk gaa Edremit Kocaseyit Airport na Fraịde na-esote (06.11.2019).
“CHINEKE KA ANYID EME A
Onye isi obodo nke Balpolkesir nke Obodo Y Mayorcel Yılmaz kọwara na ha mere ihe banyere nchegbu nke nasıl otu anyị nwere ike isi nye ọrụ kachasị mma ““ Balıkesir Chamber of Drivers, Balıkesir Public Transportation A.Ş. na n'ihi nzukọ anyị na Ngalaba Transportgbọ njem, nke na-ebu ọrụ a niile, mkpa ọrụ dị otú a pụtara. Anyị tinyekwara uche anyị ka anyị mee ọrụ a ka ụlọ ọrụ nke Metropolitan Municipal nke Balikesir BTT ga-arụ. Citizensmụ amaala na-enweghị nnwere onwe, na-echekwa onwe ha ma na-agbaso oke oge iji ruo ebe ha chọrọ iru ụzọ ha ga-esi banye ọrụ, ga-aga nke ọma. "
3. Aha ọdụ ụgbọ elu ahụ bụ Recep Tayyip Erdoğan…
Ụzọ ise ụgbọ ala ga-aga Gebze n'afọ ọhụrụ ahụ
50 Blue Bus More ka Antalya nnukwu Ụgbọ njem
Ụgbọ ala ọhụrụ na İZULAŞ site na 110
Ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri Izmir na-apụ apụ
Ụgbọ njem bọs malitere na İzmir
Ozi 22 si na TEMSA gaa France
Balıkesir ụlọ nke ọkwọ ụgbọala